Goolhaayihii hore Arsenal Jens Lehmann oo sheegay in Mohamed Salah uu soo afjari doono awooda Messi iyo Ronaldo – Gool FM
Goolhaayihii hore Arsenal Jens Lehmann oo sheegay in Mohamed Salah uu soo afjari doono awooda Messi iyo Ronaldo
Dajiye August 11, 2018
(Yurub) 11 Agoosto 2018. Goolhaayihii hore kooxda Arsenal Jens Lehmann oo xaqiijiyay in weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah uu soo afjari doono awooda iyo taliska xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
“Mohamed Salah wuxuu awood u leeyahay inuu jabiyo awooda Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, isla markaana uu ku guuleysan karo abaal marinta laacibka ugu fiican aduunka, kadib markii ay labadan xidig kusoo wada guuleestay min 5 jeer”.
“Inuu ku biiro liiska ciyaartoyda u sharaxan inay ku guuleysan karaan abaalmarinta xidiga sanadka adduunka waa mid aad u fiican, laakiin hadii Liverpool ay ku guuleysan laheyd Champions League, abaalmarintaas aad ayuu ugu dhawaan lahaa inuu ku guuleysto”.
Waxaa xusid mudan in 26 jrkan qeyb loogaga soo dhigay liiska xidigaha u sharaxan ku guuleysiga abaal marinta xidiga ugu wanaagsan aduunka ee Ballon d’Or sanada 2018, kadib bandhigiisa cajiibka ah uu ka sameeyay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
“Waxaa muhiim ahaan lahayd in naloo ogolaado 6 badal, kulamada daah furka”… Jose Mourinho
Chelsea oo Guul weyn ku Daah furatay horyaalka Premier League xili uu Shabaqa gaaray Saxiixa cusub ee Jorginho+SAWIRRO